Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada(Bogga 2)
2020 / 11 / 18 7617
Mar kasta oo aad dooratid inaad dib u habayn ku sameysid musqulahaaga, waxaa ku soo food leh go'aanno aan tiro lahayn. Miyaad ku dhejin doontaa naqshadda hadda jirta ama dib u qaabeyn doontaa? Barnaamij noocee ah ayaad jeclaan laheyd inaad isticmaasho? Maxaa isku dhafan ...
Sida Loogu Xulo Qasabadaha Saxda ah ee Basaskaaga
2020 / 11 / 16 7549
Tuubbada hoose ee hoose ayaa laga yaabaa inay ogeysiiskaaga ku dhaaftay shaashadda naqshadeynta, laakiin maadaama musqusha ay tahay qayb ka mid ah gurigaaga oo aad isticmaasho maalin kasta, waxaa habboon inaad waqti iyo dadaalba u qaadatid sidii aad u ogaan lahayd o ...
TILMAANKA Iibsiga ugu wanaagsan ee foosto
2020 / 11 / 16 7343
Kudar qaab & shaqeyn qasabad jikada oo cusub. Mid ka mid ah qalabka jikada ee ugu wax ku oolka ah ayaa sidoo kale labanlaabmaya sida lahjadda ugu habboon - qasabadda jikadaada. Haddii aad dhaqaysid cuntada, orodka ...
2020 / 11 / 16 7719
Iibsiga tuubada saxda ah ee jikada waxay kuxirantahay inta badan dhuumaha jira. Xulashada qasabadda cusub ee jikada way fududaan kartaa sida aad u malaynayso marka aad tixgeliso saddex faahfaahin oo muhiim ah ka hor ...
Sida Loogu Soo Xulo Qasabada Musqushaada
2020 / 11 / 16 6767
Si aad ugu raaxeysato jilicsanaanta iyo jiritaanka caafimaad ee musqushaada, xulashada qasabad aad u wanaagsan runtii waa mid aad muhiim u ah. Hoos waxaad ku baran doontaa sida loo doorto tuubbo cabsi badan. 1. Fashion Noocyada ...
Sida loo Xulo Qasabada Musqusha
2020 / 11 / 12 7159
Musqulaha ku dhex yaal guryaha is-kaashatada ayaa runtii ah meel caan ah. Noocyada qurxinta iyo muuqaal nadiif ah oo fiiqan ayaa muhiim u ah kaqeybgalayaasha reerka iyo martida si isku mid ah. Waxaa laga yaabaa in kan ugu ...
Fikradaha ugu sarreeya ee dib-u-habeynta musqusha ee miisaaniyadda
2020 / 11 / 12 7485
Waxay u muuqan kartaa wax aan macquul aheyn bilowga, laakiin fikradda dib u habeynta musqusha ee miisaaniyadda gabi ahaanba waa la gaari karaa. Way adag tahay in la hubiyo, laakiin aakhirka, kama baxdo barashada ama ma fulinayso ...
Wowow Madoobaha Madbakha Madow: Qaabka iyo Shaqeynta Hal Qalab
2020 / 11 / 12 6603
Tuubada jikada madow waxay qurxin kartaa jikadaada daqiiqad gudaheed. Ma jiraan wax shuruud ah oo aad ku daawan karto qasabado kale oo ku habboon saxankaaga ama maacuunta kale ee jikada maxaa yeelay fawdada jikada madow ...
Sida Loo Xullo qasabadaha Jikada
2020 / 11 / 08 5846
Dhammaan qalabka iyo qalabka, tuubada jikada ayaa laga yaabaa inay tahay mida aan inta badan isticmaalno. Sida laga soo xigtay soo saaraha qasabadda ee KWC, qoyska guud ee iska leh ayaa ka faa'iideysta qasabadda jikada in ka badan ...
Qasabadaha jikada dib loo eegay - Qasabadaha Jikada ee ugu Fiican Dhamaan Naqshadaha iyo Baahiyaha
2020 / 11 / 08 6393
Marka la rajeynayo in la dhammeeyo jikada, shakhsiyaad badan ayaa dareemaya in booskani yahay xoogaa kulan, iyo meel ay ku wada xiriiraan qoyska oo dhan. Qoysasku waxay isugu yimaadaan quraacda subaxdii waxayna la hadlaan o ...
Tilmaame ku saabsan Sida loo doorto Tuubbooyinka Jikada ugu Fiican
2020 / 11 / 08 6345
Maanta, qasabadaha jikada waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan oo dhismayaal firfircoon. Qasabadaha-guridda u muuqda waxay ku eegi doonaan waxyaabo aan caadi ahayn jikada qaabka caadiga ah, halka qasabadaha casriga ahi ay ammaani doonaan s ...
Raadi Tubooyinka Jikada
2020 / 11 / 08 6533
Markii hore, qasabadaha jikada ayaa si fudud loogu baahan yahay; si kastaba ha noqotee, hadda waxay ku darayaan qaab aragtida guud ee jikadaada. Waxaad ogaatay in bulaacadaha hadda la heli karo qaababka wareega, qorshooyinka, materia ...